Soomaaliya, 01 April 2018
Buulo-Mareer: Al Shabaab oo Weerartay Saldhig Amisom
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo culus oo maanta ka dhacay Gobolka Shabeellada Hoose kadib markii Al-Shabab ay weerartay magaalada Buulo Mareer iyo degmooyin kale oo u dhow halkaasi.
Madaxweyne Biixi oo Magacaabay Agaasimayaal iyo Gudoomiyayaal Gobol
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay xilal kala duwan oo isugu jira agaasimayaal guud iyo guddoomiyayaal gobol.
Puntland oo Laga Dalbay Siidenta Dad U xiran Burcad Badeednimo
Ehelada rag hore loogu qabtay dambiyo la xiriira Budhcad Badeednimo oo la sheegay inay ku xiran yihiin magaalada Garoowe ayaa ugu baaqay mas’uuliyiinta maamulka Puntland inay sii daayaan.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdishu ayaa sheegaya in ciidankii hore u joogay Dhismaha Baarlamaanka ee Muqdisho dib loogu celiyay mas'uuliyadda amniga baarlamaanka maanta.
Maxkamad ku taalla dalka Talyaaniga ayaa xukuntay in magdhow la siiyo nin Soomaali ah oo dambi aanu gelin xabsiga ugu jiray 17 sano.
Aragtida Dadka Muqdisho ee Muranka Mooshinka Baarlamaanka
Waxaa baaqday kulan lagu waday in maanta ay Muqdisho ku yeeshaan mudanayaasha baarlamaanka, kadib marki uu soo farageliyay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa gardarro ku tilmaamay dacwadda ay dawladda Soomaaliya u gudbisay Qaramada Midoobay ee ka dhanka ah heshiiska Dekedda Berbera.
Madaxweyne Farmaajo oo Hakiyay Mooshinkii Baarlamaanka ee Maanta
Waxaa maanta baaqday kulan ay mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ku dhageysan lahaayeen mooshin kadhan ah Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ka dib codsi ka yimid Madaxweyne Farmaajo.
Waddooyinka Halbowlaha u Ah Xamar oo La Xiray
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in la xiray waddooyinka halbowlaha ah ee dhowr isgoys oo ku yaalla caasimadda.